I-Sea Glass Cottage | I-Park Point Beach Access
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Heirloom
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Heirloom izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-Sea Glass Cottage ePark Point | Ibanga lokuhamba ngezinyawo ukuya ebhishi, iCanal Park nokuningi!
Bhuka ukuhlala kwakho e-Sea Glass Cottage futhi ujabulele ukuhamba ngezinyawo imizuzu embalwa ukuya ogwini! Leli gumbi lokulala eli-2, indlu yokugezela engu-1 iyindawo ekahle yokubaleka futhi uphumule. Ngaphansi kwekhilomitha ukusuka eCanal Parks Aerial Lift Bridge, izindawo zokudlela, ukuyothenga, imisebenzi yangaphandle nokunye okuningi. Ngaphandle komnyango wangaphambili uzothola iTot Lot kaFranklin yezingane. Ngaphesheya komgwaqo, uhamba ibanga elide ukuya e-Park Point Beach.
Ikotishi lethu elingokomlando, elilungiswe kahle futhi elihlotshisiwe linikeza amakamelo okulala amabili akhiwe phezulu. Igumbi lokulala lokuqala uzothola umbhede omusha kasayizi wenkosi yaseCalifornia, kanti igumbi lesibili linosayizi wendlovukazi omusha. Igumbi lokugezela eligcwele likuleli zinga elinobhavu wokugeza kanye neshawa.
Ikhishi linikeza isikhala esihle sazo zonke izidingo zakho zokupheka! Igcwele ngokugcwele izinto ezibalulekile zasekhishini. Vele ulethe ukudla futhi ujabulele ikhishi elifudumele, elikhanyayo ngenkathi upheka ukudla okuthandayo. Hamba uye ngqo endlini yokudlela netafula lokudlela nezihlalo ezengeziwe ukuze ujabulele ukudla komndeni kanye nekhofi lakho lasekuseni.
Igumbi lokuhlala line-TV yesikrini esiyisicaba, usayizi wendlovukazi yesikhumba okhipha usofa nemidlalo ezodlalwa yibo bonke. I-TV ihlelwe ngokusakazwa kwe-WiFi futhi sinikeza i-Netflix ne-Hulu ukuze izivakashi zizijabulele ngaphandle kokungena ngemvume!
Ukufinyelela kulo lonke ikotishi. Leli kotishi labelana ngaphandle kwezikhala ezijwayelekile ne-Driftwood Cottage, futhi liseduze kakhulu. Ungase ukwazi ukuzwa ezinye izihambeli ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Udinga isikhala esengeziwe seholide lakho elizayo? Bese ucabangela futhi ukuqasha i-Drfitwood Cottage, esendaweni efanayo, ikamelo lokulala elingu-1 eliseduze nekhaya elilala kufikela kokungu-4. Uma kuhlanganiswe ne-Driftwood Cottage, lokho kungaba ingqikithi yamagumbi okulala angu-3, okulala izivakashi ezingafika kwezi-10.
Ukuhamba kwethrafikhi akuvamile eDuluth, kodwa qonda ukuthi ungaphesheya kweCanal Park Lift Bridge futhi phakathi nezinyanga ezimatasatasa ezikebheni zasehlobo ungase ube yilokho abantu bendawo abakubiza ngokuthi "Bridged". Lokhu kungathatha noma yikuphi ukusuka ku-5-15mins kodwa kungaba mnandi kakhulu ukubona izikebhe zidlula! Uma ufuna okuthile okujabulisayo ungase uzame ukuqasha ibhayisikili eCanal Park! Uma ufuna ukuphuma ebusuku i-Uber noma iLyft zihlala zikhona.
I-Sea Glass Cottage ihamba ibanga ukusuka eCanal Park (ngaphansi kwemayela). Sikhuthaza ukuhamba, ukuhamba ngebhayisikili nokujabulela izindlela eziseduze zokuqwala izintaba ezitholakala ngasekupheleni kwePark Point. Ukufinyelela olwandle komphakathi eLake Superior kanye namamayela angu-5 olwandle lwesihlabathi ngaphesheya komgwaqo.
Lena akuyona 'indlu yephathi'. Intengo esohlwini ingashintsha. Ubuncane obujwayelekile obujwayelekile bobusuku obubili njengoba kudingwa iDolobha laseDuluth. #PL19-038
**Sicela uqaphele** Likhithika lapha. Akubikezeleki kakhulu kodwa sinakho ukususwa kweqhwa okuzoqalwa ngobuncane obungu-1". Sicela uvumele okungenani amahora angu-12 ngemva kokukhithika kweqhwa ukuze inkampani yethu iphume iyolima/ifosholo njengoba kudingeka.
4.85(162 okushiwo abanye)
4.85 · 162 okushiwo abanye
UHeirloom Ungumbungazi ovelele